शिक्षक नियुक्तिमा अध्यापन अनुमति पत्र बाधक, के हुन सक्छन् विकल्प ?
सोमबार, साउन १८, २०७८ ०७:२८:१५
बुधबार, असार २, २०७८ एस.पी. ढकाल
दुर्गमका माध्यमिक तहमा शिक्षक नियुक्ति अन्ठसन्ठको विषय बनेको छ । विशेष गरी विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक पदका लागि । शिक्षा क्षेत्रको चालु योजना विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जारी छ । सो कार्यक्रम अन्तर्गत गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषयका लागि शिक्षण सहयोग अनुदान प्रदान गरिएको छ । सो अनुदान पाउन माध्यमिक तहमा कुनै पनि दरबन्दी वा राहत अनुदान नभएका (शून्य) र एक मात्र दरबन्दी वा राहत अनुदान भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । अनुदानबाट शून्य दरबन्दीमा दुई र एक दरबन्दी वा राहत अनुदान भएको विद्यालयमा एक शिक्षक नियुक्ति गर्न सकिने छ । बिडम्बना ! विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयमा दुर्गम क्षेत्रका धेरै विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति हुन सकेका छैनन् । पटकपटक विज्ञापन गर्दा पनि धेरै जसो विद्यालयमा एक जनाको पनि दरखास्त नै पर्न नसकेको अवस्था छ । शिक्षक नियुक्ति फलामका च्यूरा चपाउनु जस्तै भएको छ । शिक्षक नियुक्तिका लागि बजेट छ । तर खर्च नहुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । धेरै विद्यालयहरूले शिक्षक अभावको सामना गरिरहेका छन् । जसका कारण ती विद्यालयबाट रिस, आवेग र कुष्ठाका स्वरहरू देख्न र सुन्न थालिएका छन् ।
केही वर्षअघि गाउँगाउँमा विद्यालय खोल्ने लहर निकै चल्यो । त्यो गाउँले मा.वि. खोल्यो हामीले किन नखोल्ने भन्ने खालको प्रतिस्पर्धा नै बन्यो । विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति चाहियो । अनुमति प्राप्त गर्न भौतिक पूर्वाधार, विषयगत शिक्षक नियुक्ति, आम्दानीको स्रोतको सुनिश्चितादेखि चाहिने हरेक कुरामा समुदाय समक्ष देखियो । जब अनुमति पाइयो अनि सुरु भयो अभावै अभाव । शिक्षक छैन । भवन छैन । यो छैन । त्यो छैन । सबै छैन जस्तै गरी माग्न सुरु गर्ने अवस्था बनेको छ । ती मध्येको एक शिक्षक मागको सम्बोधन गर्न संघीय सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट शून्य र एक मात्र दरबन्दी प्राप्त विद्यालयलाई क्रमश दुई र एक माध्यमिक तहको शिक्षक नियुक्तिका लागि अनुदान उपलब्ध गराएको छ । ३५ हजार ९ सय ९० रूपैयाँ तलब स्केल तोकेर अनुदान स्थानीय तहलाई पठाएको छ । उक्त रकम गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषय शिक्षक नियुक्तिका लागि मात्र खर्च गर्न पाउने सर्तमा मात्र ।
बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा भनिएको छ, शिक्षण सिकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ बमोजिम शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्छ । कार्यविधिको परिच्छेद–३ मा शिक्षक नियुक्ति र सेवासर्त सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त परिच्छेदको दफा ७ को ‘क’ ले प्रचलित ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेखित प्रक्रियाको आधारमा शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । अनुदान कोटामा गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषय शिक्षक मात्र नियुक्ति गर्न पाइने छ । उम्मेदवार बन्न न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अध्यापन अनुमतिपत्र सहितको आवश्यक योग्यता चाहिन्छ ।
अध्यापन अनुमतिपत्र बेगर शिक्षक बन्न पाइदैन । यो व्यवस्था प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमावलीमा छ । धेरै विद्यालयले स्थानीय सञ्चार माध्यम, राष्ट्रिय दैनिकमा पनि विज्ञापन आह्वान गर्दा पनि कसैको दरखास्त पर्न सकेन । न्यूनतम योग्यता भेटियो अध्यापन अनुमतिपत्र भेटिएन । अनुदान रकम फ्रिज हुने चिन्ताले पिरोलेको छ विद्यालयहरूलाई । जसका कारण विद्यालयहरू कुण्ठित बनेका छन् । त्यो कुण्टा र आवेग व्यक्त गर्ने थलो स्थानीय शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा बनेका छन् । त्यसैगरी स्थानीय तहका शिक्षा हेर्ने प्रमुखहरूका लागि दबाब प्राप्तिको गतिलो स्रोत पनि ।
अध्यापन अनुमतिपत्र छैन । न्यूनतम योग्यता छ । त्यस्तालाई शिक्षक पदमा नियुक्तिका लागि उम्मेदवार बनाउन पाउनुपर्ने माग विद्यालयहरूको छ । शिक्षक नपाएर पढ्नबाट विद्यार्थी बञ्चित हुनुपरेको छ । तर शिक्षा हेर्ने प्रमुखमा प्रचलित शिक्षा ऐन, कानुन र कार्यविधिका पाना पल्टाएर अध्यापन अनुमतिपत्र बेगर शिक्षक नियुक्ति गर्न मिल्दैन भन्नु पर्ने बाध्यता । किनकि कर्मचारीको असल मित्र भनेको नै कानुन हो । कर्मचारी कानुनको सच्चा परिपालक हो । कार्यान्वयन कर्ता हो । विद्यालयमा विषयगत शिक्षक छैनन् । विद्यालयहरू निजी स्रोत शिक्षकको तलबले ऋणमा छन् । समस्या एकातिर छ । कानुनी बन्धन अर्कोतिर । जसले गर्दा समस्या देखेर पनि नदेखे जस्तो । बुझेर पनि नबुझे जस्तो । थाहा पाएर पनि थाहा नपाए जस्तो गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अध्यापन अनुमतिपत्र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने पक्षसँग जोडिएको छ । क्षमतावान दक्ष र योग्य शिक्षक छनोटको कसीका रूपमा लिइएको छ । तर कक्षाकोठामा शिक्षक नै भएन भने के को गुणस्तर भन्ने सवाल माथिको सन्दर्भले उठाएको छ । यसर्थ विद्यमान परिस्थितिमा दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयको कक्षाकोठामा पहिले शिक्षक खोज्ने कि गुणस्तर ! यो सन्दर्भ पेचिलो बनेको छ । दुर्गमका विद्यालयहरूमा शिक्षक नियुक्तिका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र बाधक बनेको छ ।
अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्था र अवस्था
शिक्षण एक प्राविधिक कार्य हो । यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान, सीप र दक्षता आवश्यकता पर्दछ । शिक्षक बन्न योग्य छ वा छैन भन्ने अन्तिम परीक्षण शिक्षक सेवा आयोगले गर्छ । डाक्टर, वकिल, इन्जिनियर लगायतलाई पनि लाइसेन्स चाहिन्छ । शिक्षण कार्यलाई पनि विशेष महत्वको क्षेत्रका रूपमा हेरियो । त्यसैको परिणाम स्वरूप शिक्षा ऐन, २०२८ को २०५८ माघ २५ गते भएको सातौं संसोधनले शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रको अनिवार्य व्यवस्था गर्यो । अध्यापन अनुमतिपत्र वेगर शिक्षक बन्न नपाइने बाध्यकारी व्यवस्था छ । शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा सञ्चालन र अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण गर्दै आएको छ ।
सुरुका विज्ञानपनहरूमा अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि उत्तीर्ण हुनेको संख्या अधिक रह्यो । उत्तीर्ण प्रतिशत ९५ प्रतिशत माथि नै भयो । अनुत्तीर्ण हुनेको संख्या न्यून थियो । पछिल्ला विज्ञापनहरूमा ठिक उल्टो भयो । अनुत्तीर्ण हुनेको संख्या अधिक र उत्तीर्ण हुनेको संख्या न्यून । २०७६ असारमा लिइएको अध्यापन अनुमतिपत्र परीक्षाको नतिजा मात्रै हेर्ने हो भने निरासाजनक छ । यसले पछिल्ला विज्ञापनको अवस्था चित्रण गर्दछ । २०७६ सालको परीक्षामा दुई लाख २६ हजार परीक्षार्थी सम्मिलित भए । तीमध्ये करिब १८ हजार मात्रै उतीर्ण भए । आयोगले २०७६ मा पहिलो पटक विषयगत शिक्षक लाइसेन्सको व्यवस्था गर्यो । माध्यमिक तहको नेपाली विषयको परीक्षामा जम्मा १७.०६ प्रतिशत उत्तीर्ण भए । त्यसैगरी निम्नमाध्यमिक तहमा ४.२० प्रतिशत मात्रै । सामाजिक, गणित, विज्ञान विषयमा १० प्रतिशतभन्दा माथि उत्तीर्ण हुन सकेनन् । उत्तीर्ण प्रतिशत हेर्दा नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । शिक्षा संकाय अध्यापन गर्ने शिक्षण संस्था, विश्वविद्यालय क्याम्पसहरूलाई सोचनीय बनाएको छ ।
शिक्षा शास्त्र संकाय अध्ययन गरेकालाई अध्यापन अनुमतिपत्र दिनका लागि परीक्षा किन अनिवार्य भन्ने सवाल पनि छ । अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त शिक्षकले पढाएका र अनुमतिपत्र नभएका शिक्षकले पढाएका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा फरक छ भन्ने कुनै प्रमाणित अध्ययन छैन । अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका शिक्षकले अन्यले भन्दा प्रभावकारी शिक्षण गर्न सक्छन् भन्ने कुनै वैध प्रमाण छ र भन्ने तर्क र सवाल पनि उठ्ने गरेको छ ।
विकल्प के हुन सक्छन् ?
अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त जनशक्तिको अभावमा विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन । दक्ष शिक्षक र गुणस्तर दुबै हुनु सुनमा सुगन्ध जस्तै हो । शिक्षकको अभावमा विद्यार्थीको पठनपाठन नै नहुन सबैभन्दा अन्याय पनि । विद्यालय स्रोतबाट तलब खाने गरी अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेका शिक्षक नियुक्ति भएका छन् । ती शिक्षकले सिकाएको ज्ञानप्रति वैधताको प्रश्च खडा गर्ने हिम्मत कसैले गर्न सकेको छैन । राम्रोबाट धेरै राम्रो, उत्कृष्टबाट सर्वोत्कृष्टको खोज गर्ने प्रयत्न राम्रो हो । तर राम्रोको सुनिश्चिताको ख्याल नगरी धेरै राम्रो र उत्कृष्टको ख्याल गरी सर्वोत्कृष्टको पछाडि लाग्नु भने उचित होइन ।
भनिन्छ, हरेक समस्यासँगै समाधान हुन्छ । समाधान गर्ने विकल्प पनि हुन्छन् । ती समाधानका विकल्पमध्ये पहिलो हो विद्यमान कानुनको संसोधन । कानुन कठोर बनाएर समस्याको समाधान हुदैन । कानुन कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्छ । कानुन सामाजिक न्यायका लागि साधक होस् बाधक नहोस् । अध्यापन अनुमतिपत्र चाहिने बाध्यकारी व्यवस्थामा विकल्प दिन सकिन्छ । न्यूनतम योग्यता र अध्यापन अनुमतिपत्रको आवश्यक कागजातसहित राष्ट्रिय दैनिक, स्थानीय सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल लगायतमा खुला विज्ञानपनको सूचना सार्वजनिक गर्ने । दोस्रो, तेस्रो पटकसम्म पनि विज्ञापन गर्ने । दरखास्त नपरे न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका आधारमा मात्रै दरखास्त लिन सकिने विकल्प नियमावलीमा संसोधन गरी राख्न सकिन्छ । त्यसरी नियुक्ति पाएको शिक्षकले शिक्षक सेवा आयोगले गरेको अध्यापन अनुमतिपत्रको पहिलो विज्ञापनबाट उत्तीर्ण हुन नसके स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था थप्न सकिन्छ ।
अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदानको निरन्तरता दिनु अर्को विकल्प हो । आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि विज्ञापन नहुँदासम्म अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । कम्तिमा ६÷६ महिनामा न्यूनतम मापदण्डका आधारमा अस्थायी अध्यापन अनुमति प्रदान सकियो भने पनि समस्याको धेरै समाधान हुने देखिन्छ । जनशक्ति नै उपलब्ध नहुने समस्यामा कमी आउछ । अस्थायी अध्यापन अनुमति प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था भएता पनि त्यसको निरन्तरता नहुदा समस्या थप जटिल बनेको हो ।
शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । स्थायी शिक्षकको विज्ञापन, अध्यापन अनुमतिपत्र लगायतका आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयनको योजना बनाउनु आयोगको कर्तव्य हो । यसले आयोगको कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँछ । यसका अतिरिक्त सरोकारवालामा विश्वास र भरोसाको भाव जागृत गराउँछ । आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा समर्पित भएर लाग्न प्रेरित गराउँछ । वर्षमा सम्भव भए दुई पटक नत्र कम्तिमा एक पटक अध्यापन अनुमतिपत्र लगायत शिक्षक पदको विज्ञान सुनिश्चित गर्नु पनि विकल्प हो ।
विद्यालय समायोजन र ठूला विद्यालय सञ्चालन पनि अर्को विकल्प हुन सक्छ । गाउँगाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा धेरै जनशक्ति चाहिन्छ । लगानीको हिसाबले पनि ठाउँठाउँमा लगानी गर्दा परिमाणमुखी हुदैन । ठाउँठाउँमा लगानी गर्नु जाडोमा छोटो सिरक ओढ्नु जस्तै हो । यसर्थ भौगोलिक नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय समायोजन गर्न जरुरी छ । नक्साङ्कन गरी निश्चित ठाउँमा मात्र विद्यालय सञ्चालन गर्नु उचित देखिन्छ । जसले गर्दा थोरै जनशक्तिले धेरै विद्यार्थी पढाउन सकिन्छ । २० जना विद्यार्थी भएको कक्षाकोठामा पढाउने शिक्षकले ४० जना विद्यार्थी पनि एउटै कोठामा पढाउन सक्छन् । यसर्थ विद्यालय समायोजन गरेर पनि जनशक्ति उपलब्ध नहुने समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
विद्यार्थीको पहुँच विस्तारको माध्यम विद्यालय बस सञ्चालन पनि हो । पूर्वाधार र जनशक्ति प्रयाप्त विद्यालयमा यो सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन् । जसका कारण विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । पूर्वाधार र जनशक्ति सम्पन्न विद्यालयमा थप लगानीको परिणाममुखी वातावरण सिर्जना हुन्छ । विद्यार्थीको विद्यालयमा सहज पहुँचलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सहज पहुँचको अभावमा शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन दिनु हुदैन । त्यसका लागि विद्यालय बस सञ्चालन गर्न पूर्ण वा साझेदारीमा अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
विद्यालय स्रोतको शिक्षक व्यवस्थापनमा विद्यालयहरू ऋणमा छन् । आम्दानीको स्रोत छैन । भोको भएर गुजारा चलाउनु परेको अवस्था छ । अनुदान कोटा पाइने भएपछि विद्यालय खुसी थिएँ । अवस्था सोचे जस्तो भएन । न्यूनतम योग्यता भेटियो अध्यापन अनुमतिपत्र भेटिएन । शिक्षक नियुक्तिका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र बाधक बन्यो । जसका कारण विद्यालयले प्राप्त गरेको अनुदान दुर्गमका धेरै विद्यालयमा फ्रिज हुने देखिएको छ । अनुदान कोटा धेरैका लागि खाऊँ भने दिन भरिको शिकार नखाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार जस्तै भएको छ । निल्नु न ओकल्नु जस्तै । टिप्न नसक्ने पहराको सुन जस्तै बनेको छ । शिक्षक बिनाको विद्यालय बनाउने कि असम्भव देखिता पनि अध्यापन अनुमतिपत्रको रटान । यो सवाल गम्भीर बनेको छ । अध्यापन अनुमतिपत्र उत्तीर्ण प्रतिशत न्यून छ । विज्ञापन अनिश्चित छ । यो परिपेक्ष्यमा कक्षाकोठामा शिक्षक सुनिश्चताको विकल्प प्रदान गरिनुपर्छ । कठोर कानुनका कारण शिक्षा प्राप्तिको अवसरबाट बालबालिका बञ्चित हुन हुदैन । यसका लागि मार्ग सहज बनाइनु आवश्यक छ । शिक्षा सर्वसुलभ बनाउनु राज्यको दायित्त्व हो । अध्यापन अनुमितपत्र थप गुणस्तरका लागि हो । यो विषम अवस्थामा पहिले कक्षाकोठामा शिक्षक अनि गुणस्तर खोजी गर्दा कसो होला !
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २, २०७८, ०७:०७:००
देशको समृद्धि र विकासमा क्रोनीकल क्यापिटालिज्मको झ्याउ शनिबार, जेठ २९, २०७८
सरकारको विभेदकारी बजेटमा शिक्षा, शिक्षकका सवालहरू र निकासको बाटो शुक्रबार, जेठ २१, २०७८
आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बजेट र शिक्षकका केही सवालहरु बुधबार, जेठ १९, २०७८
“दूध तथा दुग्ध पदार्थको नियमित सेवन, कोरोना भाइस विरुद्ध दीर्घ जीवन” मंगलबार, जेठ १८, २०७८
चौरजहारी नगरप्रमुखप्रति आक्रोशित हुनुपर्ने आधारहरू केलाउँदा शुक्रबार, जेठ १४, २०७८
कसरी गर्ने नवजात शिशुको स्याहार ? आइतबार, जेठ ९, २०७८